RASMI: Goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson Becker oo abaal-marin cusub guddoomay caawa - Hargeele - Wararka Somali State
(Yurub) 02 Dis 2019. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa caawa abaal-marin lagu guddoonsiiyey goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson Becker.
Robert Lewandowski ayaa lagu casuumay inu abaal-marinta Yachine Trophy gacanta u geliyo goolhayaha lambarka 1-aad ee Kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil.
Waxaana Alisson uu noqday goolhayihii ugu horreeyey ee abaal-marintan ku guuleysta.
Waxa uu goolhaye Alisson Becker uu abaal-marintan ku garaacay goolhayaha kooxda Barcelona ee Marc-Andre ter Stegen oo kaalinta labaad ka soo galay iyo shabaq ilaaliyaha Manchester City ee Ederson oo booska saddexaad ka soo muuqday.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Real Madrid vs Levante ee horyaalka La Liga.